နေအိမ်အသစ် အားလုံးတွင် ဆိုလာပြားများ တပ်ဆင်ရမည်ဟု ကယ်လီဖိုးနီးယား ပြည်နယ်အစိုးရ ကြေညာ - Yangon Media Group
နေအိမ်အသစ် အားလုံးတွင် ဆိုလာပြားများ တပ်ဆင်ရမည်ဟု ကယ်လီဖိုးနီးယား ပြည်နယ်အစိုးရ ကြေညာ
လော့စ်အိန်ဂျလိစ်၊ မေ ၁ဝ
လာမည့် ၂ဝ၂ဝ ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်မှစ၍ နေအိမ်တိုက်တာအားလုံးတွင် ဆိုလာပြားများ တပ်ဆင်ရမည်ဟု အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည် နယ်အစိုးရ စွမ်းအင်ကော်မရှင်က စည်းကမ်းချက်ထုတ်ပြန် လိုက်ကြောင်း မေ ၁ဝ ရက် ရိုက်တာသတင်းကဆိုသည်။
စွမ်းအင်ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်အားလုံးသည် အဆိုပါဆုံး ဖြတ်ချက်ကို တညီတညွတ်တည်း ထောက်ခံမဲပေးခဲ့ကြသည်။ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်သည် ထိုကဲ့သို့သော စည်းမျဉ်းချမှတ်သည့် ပထမဆုံး အမေရိကန်ပြည်နယ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှု လျှော့ချပြီး ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုး မြဲစွမ်းအင်များ တိုးချဲ့သုံးစွဲရေးအတွက် ထိုစည်းမျဉ်းအသစ်ချမှတ်ရခြင်းဖြစ်သည်။ ”ဒီစည်းမျဉ်းချမှတ်တာ ကျွန်တော်တို့က ပထမဆုံးပြည် နယ်ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အခြားပြည်နယ်တွေကလည်း ကျွန်တော် တို့လို လိုက်လုပ်ကြလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ သမိုင်းဝင်ဆုံးဖြတ် ချက်တစ်ခုပါ”ဟု ဒေးဗစ်ဟော့ချိုင်းကပြောသည်။
ဆိုလာပြားများတပ်ဆင်သည့်အတွက် တစ်လလျှင် ဒေါ်လာ ၄ဝ ခန့် ပိုမိုကုန်ကျမည်ဖြစ်သော်လည်း လျှပ်စစ်မီတာခ ဒေါ်လာ ၈ဝ ခန့် သက်သာမည်ဖြစ်သောကြောင့် အကျိုးရှိသည်ဟု ကော်မရှင်ကပြောသည်။ ယခုအစီအစဉ်အသစ် ကြောင့် လျော့ကျသွားမည့် ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ပမာဏသည် ကားအစီးရေတစ်သိန်းကျော်မှထွက်ရှိသော ပမာဏနှင့်ညီမျှသည်ဟုလည်း ကော်မရှင်ကပြောသည်။ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်သည် ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှု တိုက်ဖျက်ရေးတွင် တက်ကြွစွာလှုပ်ရှား ဦးဆောင်နေသည်။ ၂ဝ၃ဝ ပြည့်နှစ်မတိုင်မီ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကို စုစု ပေါင်းလိုအပ်ချက်၏ ၅ဝ ရာခိုင်နှုန်းအထိ အစားထိုးသုံးစွဲရန်လည်း ကတိပြုထားသည်။
ကိုကိုးကျွန်းမှအပ ကျန်ရှိသော စည်ပင်သာယာ နယ်နိမိတ်ပြင်ပရှိ မြို့နယ် ၁၁ မြို့နယ်တွင် အထူးစက??
ကြာရှည် တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး အကြွေးပိခြင်းမှ ကင်းဝေးစေမည့် Belt and Road ဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်ထားကြောင်??
ရီးရဲလ်သို့ ပြောင်းရွှေ့ဖွယ်ရှိကြောင်း နေမာ အရိပ်အမြွက် ဆို
ဖြိုဖျက်ခံခဲ့ရသော ဟံသာဝတီဦးဝင်းတင် နေအိမ်ကို ပြတိုက်အဖြစ် NAC တွင် ထားရှိနိုင်ရန် ပြင်ဆင်ေ??